samedi, 16 juillet 2016 12:17
Sambava : Mitohana matetika ny fifamoivoizina
Mitombo isa izay tsy izy ireo fiara miditra na mandalo ao Sambava, ary manampy trotraka izany dia saika lalan-tokana no ifamezivezena, nefa tery dia tery satria tsy misy intsony izany “trottoir” izany fa misy mpivarotra na lasa “parking”. Vokany, mitohana matetika ny fifamoivoizina, dia samy manao izay saim-patany ny rehetra.
vendredi, 15 juillet 2016 18:14
John Elite: Mitohy ny hetsika sosialy
Araka ny efa nolazain'i John Randriarimalala vao lany Solombavambahoaka tao Atsimondrano izy fa omeny ary atokany hanaovana asa sosialy, ary indrindra fa ny cantine scolaire, ny karamany iray manontolo, dia nanohy izany hetsika izany hatrany izy. Ka anio zoma 15 jolay dia ny teny amin'ny Kaominina Ampanefy Distrika Atsimondrano no nozaraina bodofotsy 500 ho an'ireo be antitra sy sahirana ara-pivelomana. Tsy adinony ihany koa ireo ankizy afaka CEPE izay nahazo fanomezana sy sakafo avokoa. Mitohy hatrany moa ny fanohanan'i Solombavambahoaka John Elite amin'ny cantine scolaire.
vendredi, 15 juillet 2016 14:32
Soamahamanina: Raikitra ny angaredona
Anaovan'ny mpitondra angaredona miaraka amin'ny HERY famoretana ny ao Soamahamanina. Ny Sinoa manohy mitrandraka ny volamena ao an-toerana araky ny fanomezana-dàlana nomen'ny Talé Jeneralin'ny ONE Rakotoary Jean Chrysostome, izay Tale nifandimby fitondrana 4. Tsy sahy miseho vahoaka moa ity farany fa dia ny talé n'ny ministeran'ny harena ankibon'ny tany indray no aroso. Tsy manaiky anefa ny mponina aty an-toerana ka dia baomba mandatsa-dranomaso no asesik'ireo mpanohana ny mpivarotra tanindrazana.
Rasoamahefa Henri - Lehiben'ny Cisco Antsirabe I
jeudi, 14 juillet 2016 12:18
Sary: Sobika Antsirabe
Antsirabe I: Efa vonona amin’ny fiatrehana ny BEPC
Efa vonona amin’ny fiatrehana ny fanadinana BEPC sahady ny Cisco Antsirabe I amin’izao fotoana izao. Efa tonga any amin’ny mpitandro ny filaminana mantsy ireo laza adina sy ny taratasim-panadinana ampiasaina amin’izany ary efa vonona ireo lehiben’ny ivon-toeram-panandinana miisa 8 ao Antsirabe I raha ny fanazavana nomen’ny lehiben’ny Cisco, Rasoamahefa Henri. Miisa 5556 moa ireo mpiadina amin’izany ka 10 taona no zandriny indrindra ary 47 taona no zokiny indrindra. Misy koa ny mpiadina jamba miisa 4 sy sembana ara-batana miisa 3 avy ao amin’ny CRMM Antsirabe. Efa voaparitaka avokoa ny fiantsoana ireo mpiadina rehetra.
jeudi, 14 juillet 2016 12:11
Mahajanga : Nidina am-dalambe ireo mpitondra bajaj
Nobahan’ireo mpitondra bajaj ny lalana manoloana ny Lapan’ny tanàna Mahajanga ny alarobia 13 jolay atoandro teo. Tsy fankasitrahana ny fandoavana ny “licence” mitentina 200.000 Ariary isan-taona amin’ny Kaominina no antony. Mahatratra 2000 mahery ireo bajaj miasa eto Mahajanga.
jeudi, 14 juillet 2016 11:32
Sambava : Mpampianatra nisoloky vola « vacation »
Vola tambin’ny fitsarana fanadinam-panjakana, mitentina 90.000 Ariary, an’ny mpampianatra namany ihany no nosolokiany. Laharana kara-panondron’ilay mpampianatra namany io no nampiasainy nakany ny vola. Tonga haka vola ny tena tompony vao gaga fa efa nisy nanao sonia ny teo amin’ny manandrify ny anarany. Rehefa nohamarinina, dia teo no fantatra ny nahavanon-doza.
mardi, 12 juillet 2016 22:55
Ny basy tsy mahasolo ny penina ary ny penina tsy voagejan'ny basy.
mardi, 12 juillet 2016 16:13
Tsy navela hanatanteraka ny diabe izay natao teny ankorondrano.
lundi, 11 juillet 2016 15:07
CEPE Toamasina I : 75,32% ny taham-pahafahana
Nivaly io antoandro io ny voka-panadinana CEPE ho an’ny Faripiadidiam-pampianarana Toamasina I. 75,32% ny taham-pahafanana tamin’ity raha 95,28% izany tamin’ny taon-dasa. Nisy fihenany 20% teo. Ny taranja lazaolana no voalaza nampilatsaka ny naotin’ny ankamaroan’ny mpiadina. Afa-panadinana soamantsara ny 2 tamin’ireo kandida manana olana ara-pahitana (jamba) niisa 3 teto Toamasina I. 19,50/20 ny naoty ambony indrindra azon’ny mpiadina, izay mpianatry ny kolejy Anne Marie Javouhey-Toamasina, raha 19,80/20 tamin’ny taon-dasa.
Mahajanga : Faneriterena no betsaka
Lavitry ny fahalalahana ny fankalazana nasionaly ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina natao tao Mahajanga androany alatsinainy 11 jolay. Noterena tsy maintsy hanotrona ny vadin'ny filoham-pirenena Voahangy Rajaonarimampianina ny mpianatra kilasy famaranana ao amin’ny lisea Philbert Tsiranana raha tsy izay dia tsy mahazo ny taratasy fiantsoana amin'ny fanandinana bakalorea. Diso fanantenana ihany koa ireo fikambanana nampanantenaina fa hisy ny fanomezana ho azy ireo raha tonga hanatevina ny hetsika teo anoloan’ny Lapan'ny tananan’i Mahajanga io maraina io, nefa tsy nahazo na Ariary aza.
Page 449 sur 515